Ukunyuka kwexabiso elinqabileyo lomhlaba wempahla
Itshathi yamaxabiso ibonisa ukuba iindleko zempahla eluhlaza yeemarike zoMhlaba oNqabileyo zeNeodymium ziye zanda kakhulu kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Oku kwenza ukuba abanye abathengi babe nexhala malunga neendleko zeemveliso zabo kwaye babuze ukuba iyakuba yintoni imeko kwezi nyanga zilandelayo kwaye kufuneka basabele njani.
Kutheni iSamarium Cobalt kunye neeNeodymium Magnets zibizwa ngokuba zii “Magnets zomhlaba”?
ngomphathi ku 20-04-22
Kukho izinto ezilishumi elinesixhenxe ezinqabileyo zomhlaba-ezilishumi elinesihlanu zazo ziyi-lanthanides kwaye ezimbini zazo zitshintshi zetsimbi, i-yttrium kunye ne-scandium-ezifumaneka nge-lanthanides kwaye ziyafana ngokwamachiza. I-Samarium (i-Sm) kunye ne-Neodymium (Nd) zezona zinto zixhaphakileyo ezisetyenziselwa izinto ezinqabileyo zomhlaba kwi-app yamagnetic ...
I-Neodymium: Imvelaphi encinci uNeodymium yafunyanwa ngo-1885 ngu-chemist wase-Austrian uCarl Auer von Welsbach, nangona ukufunyanwa kwayo kwazisa ingxabano-isinyithi ayikwazi ukufunyanwa ngokwemvelo kwifom ye-metallic, kwaye kufuneka ihlukaniswe ne-didymium. Njengoko amanqaku eRoyal Society of Chemistry, ...